२०७७ साल जेष्ठ महिनाको राशिफलः कस्तो छ तपाइको भाग्य ? – Namaste Dainik
May 15, 2020 May 15, 2020 NamastedainikLeaveaComment on २०७७ साल जेष्ठ महिनाको राशिफलः कस्तो छ तपाइको भाग्य ?
मिती २०७७ साल जेष्ठ महिनाको राशिफल
मेष-मेष राशि हुने व्यक्तिको लागि यो महिना तपाईका लागि तसै उन्नतिकर । केही पक्षमा तनाब महशुस भएपनि अधिकांश पक्षमा अनुकूल एवं सफलताप्रद देखिएको छ। औद्योगिक व्यवसायका क्षेत्रमा अनुकूल छ भने महत्त्वपूर्ण कामकार्य बन्ने छन्। अध्ययनमा साथीहरुलाई किनारा लगाउँदै पुरस्कार हात पार्न सकिनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा समय दिनेहरुले पद पाउँने समय रहेकोछ । परिवारका साथ मिष्ठान्न भोजनका साथ दिन व्यातित गर्न सकिनेछ । औषधीजन्य तथा खाद्यान्नसँग सम्वन्धीत सामानको व्यापारमा वृद्धि हुनेछ भने अन्य सामानको व्यापारमा मन्दि आउँने तथा घाटा लाग्नेछ ।
बृष-सबै प्रकारका कामहरुमा लाभ मिल्ने समय रहेकोछ । माया प्रेमको गाठो कसिनेछ भने जीवन साथीको सहयोगले राम्रा काम गर्न सकिने समय रहेकोछ । पैत्रिक धन तथा सम्पतीको प्रयोग गरि कृषि तथा पशुपालन व्यावसायमा लगानी गरि आम्दानी गर्न सकिनेछ । सरसफाईमा ध्यान दिनुहोला । केही उपलब्धि एवं व्यवसायिक लाभ प्राप्त हुने छन्। तपाईका लागि यो महिनामा भगवान सूर्य नारायण,महावीर हनुमान र भैरवदेवको दर्शन भक्ति स्तुती उपाशना गर्नु शुभदायक हुनेछ।
मिथुन-पढाइ लेखाइमा अरुभन्दा पछी परेको भान हुनेछ भने काम गर्दा ख्याल गर्नुहोला काममा बा’धा तथा दुख दिनेहरु सक्रिय हुनेछन् । मान तथा सम्मानमा दाग लाग्न सक्छ, काम गर्दा ध्यान लिनुहोला । व्यावसायमा भने जस्तो आम्दानी नहुने हुनाले दैनिक गुजारा चलाउन हम्मे हम्मे पर्नेछ। आफ्ना कमजोरिहरु भरसक लुकाउने प्रयास गर्नुहोला अरुले आ’लोचना गर्न सक्छन् । बढी मेहनतले केही उपलब्धि एवं सफलता मिल्ने छ । योजना भन्दा बाहिरको काम बनेर आकस्मिक लाभ मिल्ने छ । मानप्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ।
कर्कट-आफ्नो क्षमता प्रयोग गरी अरुको ध्यान आफूतिर आकर्षित गर्न सकिनेछ भने मान सम्मानमा बृद्धि भएर जानेछ । मानव निर्मित भौतिक सम्पतिको प्रयोग गर्न पाइनेछ । जीवन साथी तथा परिवारसँग घरमै वसेर दिन व्यातित गर्न सकिनेछ । सरसफाईमा विशेष ध्यान दिनुहोला ! स्वास्थ्यमा प्रतिकुलताका बाबजुत केही काम कार्यमा सफलता र लाभ मिल्ने छ। पाएको आश्वासन पूरा हुन कठिन छ । तसर्थ आशा नगरेको राम्रो हुनेछ। बरु आशा नगरेको तर्फबाट उपलब्धि मिल्ने छ। ज्वरो,चोटपटक एवं घा’ऊ खटि’रा जन्य स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्ने छन्।
सिंह-माया प्रेम तथा मित्रताको बन्धन कसिलो भएर जानेछ भने मामा तथा मावली पक्षबाट तपार्ईँको काममा भनेजस्तो सहयोग पाइने हुदा मन प्रशन्न रहनेछ । आफन्त तथा छोराछोरीको सहयोग पाइृनेछ । विदेशी भूमिमा हुनुहुन्छ भने सरसफाईमा विशेष ध्यान दिनुहोला ।सिंह राशि हुने व्यक्तिका लागि यो महिना कुनै पक्षमा सुधार त कुनै पक्षमा अबरोधयुक्त रहने छ। केही उन्नति एवं उपलब्धिमूलक र केही सफलता मिल्ने छ। पेशागत प्रतिष्ठा बढ्ने छ। राजनीति एवं सामाजिक भूमिका बढेर जाने छ।
कन्या-स्वास्थ्य आफ्नै काबुमा रहने हुनाले काम गर्ने जोस जागर बढेर आउनेछ। अध्ययन अध्यापनमा अरुलाई पछी पार्दै पुरस्कार तथा प्रशंसा पत्र जित्न सकिनेछ । व्यापारमा मन्दि आउने तथा घाटा लाग्नेछ । आफन्त तथा परिवारका साथ दिन विताउन सकिनेछ भने सन्तानको प्रगति देखेर मन रमाउनेछ । सरसफाईमा ध्यान दिनुहोला ।बढी महत्त्व दिएका कार्यमा अबरोध आएपनि दैनिकी कार्यमा सफलता र उन्नति हुनेछ। व्यवसायिक प्रगति हुनेछ। समय पुरुषार्थीकर छ। कर्मयोगीहरुलाई सफलता मिल्नेछ। इष्टदेव–गुरुजन तथा आस्थामा ह्रास आउन सक्नेछ।
तुला-राजनीति तथा समाजसेवामा समय लगानी गर्नेहरुले सर्बसाधारणसँग सन्तुलित व्यावहार गर्नुहोला काम बिग्र’ने हुँदा मान सम्मानमा आघात पुग्नेछ । अध्ययन अध्यापनमा तपार्ईँको कमजोर उपस्थितिको फाईदा अरुले उठाउँन सक्छन् ध्यान दिनुहोला । व्यापार व्यावसायमा न्यून नाँफा हुनेछ भने कृषि तथा पशुपालन व्यावसाय फस्टाएर जानेछ । माया प्रेममा मनमु’टावको अवस्था सिर्जना हुनेछ । संघर्ष एवं अबरोधको सामना गर्न पर्ने र स्वास्थ्यमा पनि केही प्रतिकूलता देखिने छ। आहारविहारमा ख्याल पुर्याउनु बुद्धिमानी हुनेछ। विपक्षी सक्रिय रहने तथा विश्वासघात र आ’रोप्रत्यारोपको सामना गर्नु पर्नेछ।
बृश्चिक-दाजुभाई तथा छिमेकिबाट सहयोग तथा उपाहार प्राप्तिको योग रहेकोछ । खोज तथा अनुशन्धानको क्षेत्रबाट सकारात्मक नतिजा निकाल्न प्रशस्त समय खर्चनु पर्नेछ । आफूलाई मन पर्ने भौतिक सम्पती जोड्न पाउँदा मन हर्सित हुनेछ । औषधीजन्य तथा खाद्यान्नसँग सम्वन्धीत सामानको खरिद बिक्रीमा वृद्धि हुनेछ भने अन्य सामानको व्यापारमा मन्दि आउँने तथा घाटा लाग्नेछ । महत्त्वपूर्ण काममा रोकावट आउनसक्ने छन्। दैनिक पेशा तथा व्यवसायको क्षेत्रबाट सामान्य लाभ हुल्नेछ । दाम्पत्य क’ष्ट तथा प्रेममा बाधा उत्पन्न हुनेछ।
धनु-दमदार बोलिको प्रभावले नसोचेको कामहरु हुने तथा सबैले तपार्ईँको तारिफ गर्नेछन् । पढाइ लेखाइमा राम्रो प्रगति गर्न सकिने हुदा आफन्त तथा गुरुजनहरु खुसी हुनेछन् । प्रेममा आत्मियता बढ्नेछ भने कुटुम्ब तथा आफन्तबाट सहयोग पाइने योग रहेकोछ । साथिभाई तथा आफन्त सँग सँगै रहेर स्वादिष्ट भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ । तरपनि वाहिरी वातावरण तथा सरसफाईमा ध्यान दिनुहोला । अधुरा कामकार्यहरुलाई पूर्णता दिन सकिने छ । तथापि व्यक्तित्त्व एवं कर्मक्षेत्रको प्रतिष्ठा बचाउन निकै व्यवहारिकता र संयमको जरुरी पर्नेछ। शिक्षा व्यवसायी र विद्यार्थीका लागि समय सफलताकर रहेको छ।
मकर-पढाइमा प्रतिस्पर्धीहरुलार्ई किनारा लगाउँदै नतिजा आफूतिर ल्याउँन सकिनेछ । माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ भने घर परिवार तथा आफन्त बिचको सम्बन्धमा सुधार भएर जानेछ । सुन्दर तथा विलासी बस्तुहरुको प्रयोग मार्फत अरुको मन आफूतिर आकर्षित गर्न सकिनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको गतिलो समर्थन प्राप्त हुनेछ । र पनि विशेष महत्त्वपूर्ण कामहरुमा अड्चन आउने छन्। सामान्य कामकार्यहरुमा भने केही सफलता मिल्ने छ। पारिवारिक एकताबाट विशेष कठिनाईलाई निवारण गर्नसकिने छ।
कुम्भ-कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूले यो महिना अल्लि सावधानी अप्नाउन पर्नेछ । स्वास्थ्य सम्वन्धी सामान्य सम’स्याले सताउँन सक्छ खानपानमा ध्यान दिनुहोला । परिवार तथा आफन्तजन तपार्ईँदेखि टाडिनेछन् । राज्यबाट द’ण्ड तथा जरिवाना हुन सक्छ काम गर्दा सजक भएर गर्नुहोला । अनावश्यक ठाउँमा बल प्रयोग हुनुको साथै बिद्या तथा प्रतिस्पर्धामा अरुभन्दा पछि परेको भान हुनेछ । वाहिरी वातावरण तथा सरसफाईमा ध्यान दिनुहोला । काममा अबरोध भएपनि नसोचिएको काम बनेर अप्रत्यासित लाभ भने हुनसक्ने छ । र पनि कामकार्यमा अनायाशै अवरोध आइपर्न सक्नेछ ।
मीन-पढाइ लेखाइमा सुधार हुने हुनाले अरु भन्दा अगाडी बढ्न सकिनेछ। ईच्छा आकांक्षा तथा मनोकामना पूरा हुने समय रहेको छ । दाजुभाई तथा आफन्तबाट भने जस्तो सहयोग हुने हुनाले दैनिकी सहज मार्गमा अगाडी बढ्नेछ । औषधीजन्य तथा खाद्यान्नसँग सम्वन्धीत सामानको खरिद बिक्रीमा वद्धि हुनेछ भने अन्य सामानको व्यापारमा मन्दि आउँने तथा घाटा लाग्नेछ । कुनै पक्षमा लाभ त कुनै पक्षमा क्षतिखति हुनसक्ने देखिएको छ। वाणी एवं समय र अवसरको सदुपयोग गर्नाले मान्छेको मन जित्न र पेशाबाट आर्थिक लाभ गर्नसकिने छ।
भोलीको राशिफल वि.सं.२०७७ साल आषाढ १३ गते । शनिबार । ईश्वी सन् २०२० जुन २७ तारिख